Pixel Power သည် ၄ ​​င်း၏ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြေရှင်းနည်းများကိုမြှင့်တင်ပေးသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » pixel ပါဝါင်း၏ဆော့ဖ်ဝဲကိုဖြေရှင်းချက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုးမြှင်
ကိန်းဘရစ်ချ်7အောက်တိုဘာလ 2019: က၎င်း၏ဖြေရှင်းချက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏အရေးပါမှု, pixel ပါဝါ အဖွဲ့နှစ်ခုထုတ်ကုန်အသစ်အထူးကုဆက်ပြောသည်သိရသည်။ တန်ယာ Schurawel နှင့် Toria Farrell ထုတ်လွှင့်ကနေတိုက်ရိုက် လာ. , ဖောက်သည်များအလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှု, ဂရပ်ဖစ်များနှင့်ပလေးအောက်အဘို့အ optimized ဖြေရှင်းနည်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကူညီဖို့ဟာသူတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုသုံးပါလိမ့်မယ်နှစ်ဦးစလုံး။
တန်ယာ Schurawel သူမကအများဆုံးမကြာသေးမီကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကြီးကြပ်ရေးမှူး, Animation နဲ့ဒီဇိုင်နာရှိရာအမေရိကန်အတွက် Univision ကနေကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲဖြစ်သည်။ သူမ၏ခိုင်မာတဲ့နည်းပညာနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုနောက်ခံနှင့်အတူတန်ယာ - Florida- အခြေစိုက်လိမ့်မည်သူတို့၏ရှုပ်ထွေးလိုအပ်ချက်များကိုသေချာ, pre-ရောင်းအားကာလအတွင်းဖောက်သည်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပါလိမ့်မယ်ဖော်ထုတ်နှင့်ကျေနပ်ဖွယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း pixel ပါဝါ'' s ကို virtualizable, modular စနစ်များကို။
Toria Farrell ယခင်ကနီပျားမီဒီယာမှာထုတ်လွှင့် Controller ကိုခဲ့ပါတယ် /Ericsson က။ Toria တစ်ခု EPG ကို Scheduler အဖြစ်ဘီဘီစီမှာသူမ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ခဲ့ပြီးနှင့်သူမ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကွန်ယက်ကိုဒါရိုက်တာနှင့်ပလေးအောက်ကိုဒါရိုက်တာအဖြစ်သူမ၏လုပ်ရပ်မမြင်စဖူး။ Toria 2013 အတွက် BT အားကစားပစ်လွှတ်မှုအတွက်ဂီယာပစ်လွှတ်အသင်း၏အဓိကအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး, 2015 အတွက်အကြီးတန်းပလေးအောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူမသည် Channel ကို 4, BT အားကစားနှင့် BBC World News မှ uktv နှင့် ITV ကနေအများကြီးကို client ဂီယာဒေသများအတွင်းလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအခြေစိုက် pixel ပါဝါ ကင်းဘရစ်အတွက်ဌာနချုပ်သူမကသူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမြှင့်တင်ရန်ထားတဲ့ software နှင့် virtualized ပလေးအောက်ကိုဖြေရှင်းချက်သတ်မှတ်မှဖောက်သည်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
"software ကို-defined, virtualizable ဖြေရှင်းချက်၏နီးပါးအဆုံးမဲ့စွမ်းရည်မှကြီးမားသောဟာ့ဒ်ဝဲတပ်ဆင်ထံမှပလေးအောက်ရွေ့လျားသကဲ့သို့, ထုတ်လွှင့် afresh သူတို့၏စစ်ဆင်ရေးများနှင့် Workflows ကိုကြည့်ဖို့လိုပါတယ်," ဂျိမ်းစ် Gilbert ၏ CEO ဖြစ်သူကပြောပါတယ် pixel ပါဝါ။ "ရောင်းချသူ, ဆန်းသစ်လက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်တတ်နိုင်နည်းပညာများနှင့် Workflows သို့ထုတ်လွှင့်မယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကိုဘာသာပြန်ဆိုအတွက်ဒီမှာအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍရှိသည်။
"တန်ယာနှင့် Toria ကြောင့်ထုတ်လွှင့်နှင့်အွန်လိုင်းဂီယာမှာသူတို့ရဲ့ကျယ်ပြန့်နှင့်လက်ရှိအတှေ့အကွုံဤဆွေးနွေးမှုများ၌ကြီးသောပိုင်ဆိုင်မှုနေကြတယ်" ဟု Gilbert ကဆက်ပြောသည်။ "ငါသည်သူတို့ကပူးပေါင်းခဲ့ကြဝမ်းသာတယ် pixel ပါဝါ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ - - တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိကနေသွားပါ "အဖွဲ့ကိုအကူညီပေးနေ။
အကြောင်းအရာ pixel ပါဝါတစ်ဦး Rohde & Schwarz ကုမ္ပဏီ
pixel ပါဝါ ထုတ်လွှင့်ပလေးအောက်, အလိုအလျောက်, မာစတာထိန်းချုပ်မှု, ဂရပ်ဖစ် & linear ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများတွင်အသုံးပြုအမှတ်တံဆိပ်, OTT နှင့် VOD များအတွက် software ကို-defined, virtualizable, ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုရအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ပရိုမိုးရှင်းစနစ်များ, ဂရပ်ဖစ်-enabled မာစတာထိန်းချုပ်မှု Switcher နှင့်ခေတ်မီ switchable ဂရပ်ဖစ်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်များကိုထုတ်လုပ်သူများပြောင်းလဲနေသောတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့်မည်သည့် SD ကအဘို့အ Pre-မှတ်တမ်းတင်ထားသောအကြောင်းအရာကယ်လွှတ်ခြင်းငှါခွင့်ပြုပါ, HD, 4k, မိုဘိုင်း, အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်လျှောက်လွှာ။
pixel ပါဝါ ဂရပ်ဖစ်, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ပလေးအောက်၌စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှုဖန်ဆင်းတော်မူပြီကြောင်းဖောက်သည်ထောက်ခံမှုမှအင်ဂျင်နီယာစွမ်းရည်များနှင့်အပ်နှံ 30 နှစ်ပေါင်း '' အတွေ့အကြုံကရှိနေပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောဘီဘီစီအဖြစ်စျေးကွက်-ဦးဆောင်ထုတ်လွှင့်အပါအဝင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 2500 တပ်ဆင်ထက်ပိုဖောက်သည်နှင့်အတူ, Ericsson က, ITV, SWR, WDR, TV2 နော်ဝေး, Danmark ရေဒီယို, TV5 Monde, CBC, ဒစ္စနေး, Discovery, ESPN, ViaSat နှင့် Sky ။
မကြာသေးခင်ကကဝယ်ယူ Rohde & Schwarz GmbH သည်, pixel ပါဝါ ကော်ပိုရိတ်ဌာနချုပ်မြက်ချိုင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားနှင့်ဒူဘိုင်းယူအေအီးအတွက်ဒေသဆိုင်ရာရုံးခွဲများနှင့်အတူကင်းဘရစ်ကိုဗြိတိန်၌ရှိကြ၏။
pixel ပါဝါ မှာအွန်လိုင်းကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် www.pixelpower.com.
pixel ပါဝါ ဆက်သွယ်ရန်:
အမည်: Ciaran Doran
ခေါင်းစဉ်: အမှုဆောင်အရာရှိ VP
အမည်: Jenny Marwick-အီဗန်
ကုမ္ပဏီ: Manor စျေးကွက်
Mo-Sys သည် U50 UXNUMX Remote Camera Control Head Box ကိုမှန်ဘီလူးများအတွက်တပ်ဆင်သည် - ဇွန်လ 2, 2020
Intinor သည် JB&A နှင့် NewTek မှတစ်ဆင့်အမေရိကန်အသံလွှင့်လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်သွယ်သည် - ဇွန်လ 1, 2020
Cinegy က TURBOCUT ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ Adobe Premiere Faster ဖြင့်ယခင်တည်းဖြတ်ခြင်းထက်ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ခြင်း - မေလ 28, 2020
4K automated ထုတ်လုပ်မှု အလိုအလြောကျစကျတပျဆငျမှု ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရပ်ဖစ် HD isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော linear တီဗီ မာစတာထိန်းချုပ်မှု OTT pixel ပါဝါ ပလေးအောက် Rohde & Schwarz SD switcher virtualizable modular စနစ်များ vod Workflows 2019-10-07
ယခင်: ကီဗင် Odden ၏ချိန်းနှင့်အတူအမေရိကအတွက် Vionlabs မြေများ
နောက်တစ်ခု: Cinegy အသံလွှင့်အိန္ဒိယ 2019 မှာ SRT အားသာချက်များကိုသရုပ်ပြ